03/03/2018 admintriatra 0
Nafana ny fifankahitana. Fohy nefa nampilendalenda ny seho natolotry ny tarika Njava ny alakamisy alina teo tetsy amin’ny Kudeta Anosy. Teo amin’ny ora iray teo ny naharetan’ny fampisehoana raha mahazatra antsika eto an-toerana ny fiarahana …Tohiny
Hangotraka ny fihaonana. Tafakatra hiatrika ny lalao manasa-dalana eo amin’ny taranja beach soccer amin’ny fiadiana ny Tournoi Pangalanes 2018 ny ekipan’i Morondava, Mahajanga sy Toliara ary Manakara, mpampiantrano ny hetsika. Izany hoe, ireo ekipa goavana …Tohiny
Ao anatin’ny fanamafisana ny fiarovana ny olona sy ny fananany. Tontosa omaly, tetsy amin’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka tetsy Anosy ny fanaovan-tsonia fiaraha-miasa eo amin’ny banky sy ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka. Fifanarahana niarahan’ny mpanara-maso ankapobeny ny polisy Eric …Tohiny
Ambohidratrimo : Sarim-bavy mpanao vola sandoka tra-tehaka
Sarim-bavy iray izay fantatra fa tafiditra ao anatina fikambanan-jiolahy efa ikoizana no tra-tehaky ny zandary teny Ambohidratrimo ny alakamisy maraina lasa teo. Ankoatra ny fanafihana mitam-piadiana, dia fantatra fa lohandohan’ny mpisorona amin’ny fanaovana vola sandoka …Tohiny